WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka maalmood), waxaa qoray: Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
20/03/2017	558 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Aad ayey odayaashii umuurtaasi u saameysay ka dib markii si wanaagsan loogu warramay. Waasuge oo tallaabadaas af soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaana saaxibkiis ku yiri “ Warsamoow, Allay lehe, reer magaalkii waxay afaf shisheeye ku dhaqmaamba, hadda ayey runta usoo degeen. waxaanaba sideedaba la yiri ayuu yiri “ lama huraan waa caws jiilaal”.
Warsame: Waasugoow, Af carabigii ma waxaad raacisay afafka shisheeyaha, mase waad ka reebtay.
Waasuge: ma waxaa iskaga kaa darsan Shisheeyaha iyo sokeeyaha,( carabta iyo soomaalida ayuu asagu u arkaa laba dad oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay oo kaliya), mase af soomaaliga iyo diinta?
Warsame: inkastoo aan ku afgaranayo, haddana carabta waxaan la wadaagnaa wax ayan biru goyn karin biyana mayri karin ( wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala faquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xidideystay iyo isdhexgalka labada dad.).
Cabbaar ayey labadii oday ku murmeen “af carabiga shisheeiyenimada ka daa iyo ka dayn maayo”ayagoo aan isla meel dhigin ayuu Warsame dhex galay faallo kale oo ku saabsan bannaanbaxa. si weyn ayuu Warsame ujeeddada bannaanbaxa u dhuuxay, ulana dhacay, laakiin markuu ogaaday in dadkaa faraha badan oo u soo baxay lagu ayidayo qoridda af soomaaliga, ayey dib ula soo xumaatay jawaab uu Wiil yaru siiyey mar ay odayaasha weydiiyeen sababta dadka isu keentay. wiilku wuxuu odayaasha ku yiri “dadkan waxa isu keentay waxba kama gashaan mana garan kartaan”, wuuna iska dhaqaaqay.
Warsame, waxay la ahayd inaan marna looga maarmi karin talo iyo tallaabo afsoomaaliga ku saabsan, aad ayuuna wiilkii ugu carooday. Duqu wuxuu umuurtaa ku xasuustay gabaygii Diini Gurey oo ahaa:
Afku waalid buu leeyihiyo, odayo waaweyne
Waxay ururinaayeen halkiyo,aabbihii dhalaye
Abbaartiisa kama leexinnine, wey ebyeen shalaye Irankiisa hoosiyo guntaa, laga abuuraaye
Or iyo qaylo kuma fiicna iyo, kaa anaa iriye.
Waasuge iyo Warsame, ayaga ayaa isugu dambeeyey dadkii baabuurka ka degay. inteeyan kala tegin waxay isu sheegeen danta uu mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. isbarasho xiisa leh ayaa dhex martay labada oday, waxayna kala tageen iyagoo isleh “ Ilaaheen markale ha na kulmiyo”. SIdaas ayey ku kala dhaqaaqeen, wuxuuna mid waliba markaas billaabay inuu tiigsado halkii ay degganaayeen reerihii uu usoo muraaday.
La soco Qeybta 7-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Daraasad ka hadleysa saameynta Raga ay ku yeesheen dagaalada oo Muqdisho lagu soo bandhigay
Next: Rag Bajaaj watay oo qof ku dilay degmada Yaaqshiid